UJENNA ORTEGA CAST UKUBA AKHOKELE INETFLIX YE-ADDAMS SHOW NGOLWESITHATHU - MVA
Iimfazwe Zeenkwenkwezi Ibhetshi Embi
Ndingabhiyozela ukulahlwa kukaJenna Ortega kwiNetflix yangoLwesithathu Ngelixa icala lijonge uMboniso uCuz Tim Burton
Masiqale ngokulungileyo. UJenna Ortega, owaziwayo Ewe Usuku kwaye UJane iNtombikazi , iphoswe njengo-Lwesithathu u-Addams kuthotho lweNetflix uLwesithathu . Lithuba elimangalisayo lokuba u-Ortega afikelele kubaphulaphuli ngokubanzi kwaye ababonise into anayo. Ikwangumzuzu omkhulu kuye njengomlingisi weLatinx. Abasetyhini abancinci abanjengaye likamva xa kusenziwa ukwahluka kohlobo lweemovie kunye nemiboniso esiyibonayo. Kwaye kuya kuthetha into kubafazi baseLatinx abathanda nabaziyo uLwesithathu iAdams kwaye ngoku banokunxibelelana naye kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo.
Uthotho lwe-YA lusetelwe ukuba ngumdlalo weqonga oza kubudala, obhalwe ngu ISmallville Abenzi beAl Gough kunye neMiles Millar. Isetelwe ukuba ikhokelwe nguTim Burton kwaye uphawule umboniso wokuqala wokudlala kunye nomdlalo wokuqala weTV. uLwesithathu ubalisa ibali lomntu obhinqileyo ocekethekileyo oya kwisikolo i-Nevermore Academy. Ngelixa wayelapho, usebenza ekufundeni amandla akhe obuchwephesha ngelixa emisa izilo kunye nokusombulula imfihlakalo eyadibanisa abazali bakhe kwiminyaka engama-25 eyadlulayo- lonke elixa wayehamba nobudlelwane bakhe obutsha kunye nobunzima ngokwexesha elibekiweyo .
Iposti ekwabelwana ngayo nguJenna Ortega (@jennaortega)
Kulapho izinto ezilungileyo ziphela kum kwaye xa ndiqala ukujonga ecaleni into yokuba uTim Burton ubandakanyekile kwindawo yokuqala. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, akanaziphiwo njengoko abantu becinga. Kwaye oku kuvela kumntu onothando Iphupha elibi ngaphambi kweKrisimesi , Umtshakazi ofileyo , kunye Beetlejuice . Izithunzi ezimnyama yayisisidenge, USweeney Todd: I-Demon Barber yesitalato iFleet kwakulungile, kwaye Ikhaya likaMiss Peregrine laBantwana abaKhethekileyo ngekukuhle ukuba bekungekho ngenxa yotshintsho olwenziwe kunye nomcimbi oqaqambileyo wawubhenca: ukunqongophala kokwahluka emsebenzini kaBurton.
Emuva ngo-2016, UBustle wenza udliwanondlebe noTim Burton ndambuza malunga nokungabikho kweyantlukwano kwiifilimu zakhe. Impendulo yakhe yashiya into enqwenelekayo. Uxelele uBustle , Izinto nokuba zifuna izinto, okanye azenzi njalo. Ndikhumbula kudala ndisemncinci ndibukele Iqela leBrady Kwaye baqala ukulungisa zonke izinto ezichanekileyo kwezopolitiko. Njengaye, Kulungile, masibe nomntwana waseAsia kunye nomnyama. Bendihlala ndicaphuka ngakumbi yile ngaphandle nje kokuba ... ndikhule ndibukela iimovie zokuthambisa, akunjalo? Kwaye ndathi, kulungile. Khange ndithande, Kulungile, kufanele ukuba kubekho abantu abamhlophe ngakumbi kwezi bhanyabhanya.
Isiporho kwimisebenzi yegobolondo
Kude kube namhla, impendulo yakhe indenza umsindo. Ukungazi kwempendulo yakhe kuyinyani kwaye ilungelo elimhlophe liphuma kwikona nganye. Akukho ngawe, Tim. Imalunga nabantu abangaziboniyo kwimixholo abayisebenzisayo okanye abachitha ngayo imali. Kwaye ukuba ubakhathalele abalandeli bakho kunye nabaphulaphuli bakho, uyazi ukuba le mpendulo ayisiyonto ilungileyo kwaye ayiyazi i-AF. Inciphisa iyantlukwano kwaye isebenza ngathi sisigaba okanye into. Ayiyo. Ukwahluka kulapha ukuhlala kuba kubonakalisa ilizwe lokwenyani , kwaye ukuba awubambeki kwaye ufumane nenkqubo, uya kushiyeka ngasemva.
Impendulo yakho ikwabonisa indlela ongaqondi ngayo ukuba amagama akho akhubekisa kangakanani, ngakumbi xa usithi ucatshukiswe ngabadlali baseAsia nabaMnyama abafakwa kwimiboniso okhule ubukele. Kwaye kuyabonisa ukuba kwihlabathi lakho, le uyicingayo xa usenza ihlabathi elinokuzisa kwiscreen esikhulu, limhlophe kwaphela. Ukuba nombono akuphosakeleyo, kodwa u-hella ngokobuhlanga xa uphonsa umdyarho omnye kuphela kumdlalo bhanyabhanya xa uhlanga lungabandakanyekanga kwaphela kwisiqwenga, ngokwentatheli uJulian Lopez-Albany .
Kungenxa yoko le nto ndiphikisana neNetflix's uLwesithathu . Kwelinye icala, ndonwabe kakhulu ngoJenna Ortega. Utshintsho luqala ngabantu abanjengaye. Kodwa kwelinye icala, andinakukunceda kodwa ndikhumbule amagama kaBurton angazi nto kwaye azibuze, ingaba wamkhetha? Ngaba wayemlwela? Ngaba wambona njengokhetho? Ngaba iNetflix inyanzelise isandla sayo? Ngenxa yokuba engabonakali ngathi malunga neyantlukwano ngokwamazwi akhe kwaye andizukulahla nesenti wow, wenze umsebenzi olunge kangaka ngendlela yakhe kuba andimthembi.
Ngaba uyazi ukuba nam andithembi xa kuziwa uLwesithathu ? Abanye abantu ngasemva kwezigcawu. Ngaba uthetha ukundixelela ukuba ibali elizayo lomfazi omncinci lixelelwa ikakhulu ngamadoda? Ilinganisa njani loo nto? ISmallville Abadali uAl Gough kunye noMiles Millar bayayibhala, UTim Burton ngumboniso womboniso kunye nomlawuli, ikwangumvelisi olawulayo ongumvelisi wombhali weTV uKayla Alpert, owayesakuba nguMongameli we-MGM TV uSteve Stark, kunye nabavelisi abaliqela abanxulunyaniswa neAdamsams Family IP: Andrew Mittman ngo-1.21, uKevin Miserocchi, uJonathan Glickman waseGlickmania noGail Berman, ngokwexesha elibekiweyo .
Ekuphela kwento enokuthi yenze ukuba le mveliso ibe mbi, kwaye ndibone abantu bedada bejikeleza umbono we-intanethi, kukuba uJohnny Depp wayebandakanyekile. NjengoBurton, akanetalente njengokuba abantu bemenza ukuba abe njalo. Uhlala edlala ibhola engaqhelekanga kwaye uye waba yinto ephambili kwimidlalo bhanyabhanya yaseBurton. Ungathini malunga nokulahla iDepp njenge iconic Gomez? Kungenxa yokuba ukuba uza kuphosa isikhokelo seLatinx, uya kudinga abazali baseLatinx. Ku-Gomez, ukhetho lucacile: U-Oscar Isaac kufuneka ajoyine uJenna Ortega ekuphumeleleni Usapho lakwaAddams -ngaphezulu. Sele esenza ilizwi kwinguqulelo yoopopayi. Ngaba unokumzisa kuhlobo lwentshukumo ebukhoma!
Ekupheleni kosuku, ndiyazingca ngoJenna Ortega kunye nento azimisele ukuyifeza kwiNetflix's uLwesithathu . Uyifumene engxoweni kwaye ndiyakholelwa kuye enyangeni nasemva. Yiyo abo bamngqongileyo andimthembi, ngakumbi uBurton, ngenxa yengxelo yakhe kunye nokwahluka kwezizathu zokuba engakhange achukumise ngesibonda seenyawo ezilishumi ukusukela kudliwanondlebe Ikhaya likaMiss Peregrine laBantwana abaKhethekileyo iphume. Konke esinokukwenza ngeli nqanaba, konke endinokukwenza, lithemba lokuba uBurton ukhule edlula ukungazi kwakhe kwaye iNetflix ineqela elixhasa uJenna Ortega, into ayizisayo kule ndima, kunye neLatinidad yakhe.
(umfanekiso: Amy Sussman / Getty)
Ukumelwa Ngabantu Ababini
apho kukho isabhokhwe
UJon stewart kwi-tucker carlson
ibhola yedragoni z cast american
ibhola yebhola yedrako z engeyomboniso bhanyabhanya
Umboniso bhanyabhanya abantwana balungile
umhlali ububi 0 hookshot isebenzisa
izixhobo ezimnandi eziqinileyo: imfihlo santa